Mampanangona Sary Avy Amin’ny Besinimaro Ny Tantara Mandòdona Nopotehin’ny ISIS Ao Syria Ny #NewPalmyra · Global Voices teny Malagasy
Mampanangona Sary Avy Amin'ny Besinimaro Ny Tantara Mandòdona Nopotehin'ny ISIS Ao Syria Ny #NewPalmyra
Voadika ny 05 Avrily 2016 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, Ελληνικά, عربي, Italiano, Български, Français, English
Fanorenana ara-nomerika ny Tempolin'i Bel avy amin'ny tetikasan'i Palmyra vaovao.
Azon'ny tafika vonon-kiadin'ny Filoha Bashar al-Assad avy amin'ny ISIS indray ny tanànan'i Palmyra tamin'ny faran'ny volana marsa, mahatonga ny filohan'ny firenen'ny antikite hanambara fa “tapitra hatreo” ny nofiratsin'ity tanàna Syriana fahagola ity. Voarombak'ilay vondrona mitam-piadiana mpisetrasetra ity ny tanàna tamin'ny Mey 2015 ary nanomboka ny hetsika fandravana ity harem-bakoka arkeôlôjika ity. Tamin'ny volana aogositra ny milisiny nanapa-doha an'i Khaled Asaad, lehiben'ny arkeôlôgin'ny tanàna nandritra ny dimampolo taona.
Tao anatin'ny herintaona, maro amin'ny fanorenana arkeôlôjika goavan'i Palmyra no nahasimbana na nahapotehana, ka tafiditra amin'izany ny Tempolin'i Baalshamin, ny Tempolin'i Bel, ny Fiaran'ny Fandresena ary ny Tilikambon'i Elanbel. Norobaina ny Mozea Nasionaliny. Nilaza ny ISIS fa sampy ireo asan-tanana manatantara ireo na tsy mifanaraka amin'ny fahalalany mivilana momba ny Islam, ka tokony horavàna (na amidy — toa tsy manam-pisalasalana amin'ny famoriam-bola [mg] amin'ireo vakoka “fitenenan-dratsy an'Andriamanitra” ireo anefa ilay vondrona mitam-piadiana). Tratran'izany toe-javatra izany ihany koa ny toerana arkeôlôjika maro niorina talohan'ny nahatongavan'ny vanim-potoana islamika any Iràka, ary tafiditra amin'izany ny sokitra naharitra 3000 taona tao amin'ny Mozean'i Mosul [mg].
Fotoana ela talohan'ny nahazoan'ny ISIS ny tanàna sy nahavakisan'ny ady tao Syria, mahatonga ny toeram-bakoka ho ao anatin'ny fanahiana, dia nisy fandraisana an-tanana iray niasa tamin'ny fandraketana ireo zava-mahatalanjona arkeôlôjikan'i Palmyra. Ny tetikasa #NewPalmyra, izay nanomboka nandray andrika tamin'ny taona 2005, dia hevitra avy amin'i Bassel Khartabil, Palestiniana-Syriana injenieran'ny solosaina, mpikatroka sady mpitarika amin'ny Creative Commons. Nokendren'i Khartabil ny hanorina indray ny tantaran'ny tanàna ao amin'ny maodely 3D (telorefin’)ny lahatahiry maimaimpoana an-tserasera.
Na izany aza anefa dia nosamborin'ny governemanta syriana izy tamin'ny 15 Marsa 2012. Efa-taona taorian'ny nitazonana azy dia nafindra toerana tany aminn'y toerana tsy fantatra izy. Nitaky [mg] ny amoahana izay misy sy manjo an'i Khartabil ny Human Rights Watch sy ny fikambanana 30 hafa mpandala ny zon'olombelona, saingy hatreto aloha izy dia nanjavona [mg].
Tamin'ny Oktobra teo, nisy vondrona mpikatroka iray namelona indray ny ezaka nataon'i Khartabil, nanome anarana azy ho #NewPalmyra. Nampanangona sary avy amin'ny besinimaro izy ireo ary niankina tamin'ny mpanolo-tena tamin'ny fananganana modely 3D amin'ireo vatosoa manantantaran'i Palmyra.
Have Palmyra Photos? Any before Destruction? Help Rebuild at https://t.co/RIcmbRZ9kq & Share via our new Upload Box. pic.twitter.com/311tCg2UpR
— New Palmyra (@NewPalmyraOrg) March 10, 2016
Manana ny sarin'i Palmyra ve? Izay talohan'ny Fandravana? Ampio hanangana indray ao amin'ny https://t.co/RIcmbRZ9kq ary zarao amin'ny vata vaovao fampidirana sary.
Ity ambany ity ny modelin'ny Tempolin'i Bel avy amin'ny tetikasa. Araka ny habaka, dia vao ny 20% ihany no vita tanteraka amin'ny modely:
Tsy ny #NewPalmyra irery no ezaka fiarovana harembakoka hoan'i Syria. Feno mpanolotena mitondra fakantsary telorefy mora vidy handrakitra toerana manantantara ny Million Images Database [Lahatahirin-tsary an-tapitrisany] amin'ny alalan'ny Ivontoeran'ny Arkeôlôjia Nomerika. Eo am-panatontosana ny famerenana ny endriky ny Lohalambo fidirana amin'ny Tempolin'i Bel, izay namboarina tamin'ny taona 32 AD, ao amin'ny Trafalgar Square ao Londra ny tetikasa ary hampiseho izany amin'ny 19 avrily 2016.
Zavatra iray ny fandraketana ny tantara, fa mbola zavatra hafa ihany koa ny manangana indray ny toerana rava. Mamakafaka amin'ny fahaiza-mitondratena amin'ny fanaovana izany ny lahatsoratra vao haingana nivoaka tao amin'ny tranonkalam-baovao iray natao ho an'ny avo ara-pianarana The Conversation.
6 andro izayAzia Afovoany sy Kaokazy
2 herinandro izayKatara